Gufgaf|Online ऐना हेर्दा आफैलाई राम्री देख्छु -सुर्या थापा
ऐना हेर्दा आफैलाई राम्री देख्छु -सुर्या थापा
गफगाफ - अभिनेत्री सुर्या थापाले चलचित्र शुभलभबाट चलचित्र नगरीमा डेव्यु गरेकी हुन् । दातको डाक्टर समेत रहेकी थापाले यस अघि पनि उनले केहि चलचित्रमा काम गरिसकेकी छन् । तर उनले काम गरेका अन्य चलचित्रहरु हाल सम्म पनि रिलिज भएका छैनन् । त्यसैले पनि उनि चलचित्र शुभलभलाई आफ्नो डेव्यु चलचित्रका रुपमा लिन्छीन् । उनै अभिनेत्री सुर्या थापासँग हामीले रमाइलो गफगाफ गरेका छौ ।
डक्टरी क्षेत्रमा कार्य गर्ने मानिस यो क्षेत्रमा कामगर्न कसरी समय मिलाउनु हुन्छ ?
पहिले म हस्पिटलमा काम गर्थें र समय मिलाउन अप्ठेरो हुन्थ्यो । तर अहिले आफैले आप्mनो क्लिनिक खोलेको हुँदा निर्माता निर्देशकले यो समयमा यहाँ भेट हुने है भनेर जानकारी गराएपछि त्यसै अनुसार समय मिलाएर अर्को डाक्टरलाई क्लिनिकमा बोलाएर सेवा उपलब्ध गराउने र आपूmले पनि भाग लिने गर्छु ।
आफैलाई आनौठो लाग्ने आफ्नो बानी के हो ?
ऐनामा हेर्दा आफैलाई नराम्रो देख्छु र यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । धेरैले तिम्रो नाक अलि ठूलो हो भन्छन् । सानोमा हुँदा भाइले पनि तिमी दाँतको डाक्टर भएर पैसा कमाए पछि यो नाक मिलाउ है भन्थ्यो । तर कलाकार भएर अभिनय गर्दा क्यामरा म्यान, सिनोमेटिग्राफर, मेकअप म्यान सबैले विभिन्न कोण र तरिकाले अभिनय गर्न वा सिँगार पटार गर्ने भएकोले राम्रै लाग्छ ।
पहिलो पटक कस्तो र कुन मोबाइल किन्नु भएको थियो त्यो क्षणको याद आउँछ ?
घरमा बुवा असाध्यै कडा हुनुहुन्थ्यो । पढाई विग्रन्छ भनेर टिभि सम्म पोको पारेर राखि दिनु हुन्थ्यो । त्यतिबेला सबै साथीले मोबाइल बोकेका हुन्थे । १० वर्ष अगाडि पनि करिब सात हजारको मोबाइल बोकेको थिएँ । सबैभन्दा पहिले महिले टच स्क्रीन नभए पनि एल जी को कलर मोबाइल किनेको थिएँ र पहिलो पटक कलेजको होस्टलबाट आमालाई नै फोन गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ ।
कसैलाई गालामा थप्पड हान्नु भएको थियो ?
मलाई मेरो मिल्ने साथीले नै क्लबमा गएको बेलामा मादक पदार्थ सेवन प्रयोग गरी मलाई घुँडामनी हानेर लडाएको थियो साथै नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गरेको थियो त्यहि बेलामा मैले नराम्रोसँग उसलाई बजाएको थिएँ । यो घटना पछि २–३ महिना बोलचाल पनि भएन पछि त्यो साथै आपैmले आप्mनो गल्ती स्वीकार गर्नु भयो अनि बोलचाल भयो ।
तपाईले कसैको पिटाई खानु भएको छ कि छैन ?
आमाको चड्कन खाएको छु । सानो छँदा एउटा नोटलाई एक रुपयाँ भन्थें चाहे त्यो नोट जतिसुकैको किन नहोस् । एक पटक चकलेट खान आमाको पर्सबाट एक रुपयाँ भनी एकसयको नोट लिएर पसल जाँदा पसलेले मेरो ममीलाई तपाइँको छोरीले रु.१०० चोरी गरी चकलेट खान आएको रहिछन भनिदिँदा नराम्रोसँग पिटाई खाएको छु ।
दाँतका डाक्टरहरुलाई लुटाहा पनि भन्दा रहेछन् नि ?
यसका सबै सामाग्रीहरु नेपालमा पाईंदैनन् र बाहिरबाट ल्याउन पर्छ । ती सामानहरु सबै एउटै गुणस्तरका पनि हुँदैनन् । तिनीहरूको परलमूल्य पनि गुणस्तर अनुसारकै हुन्छ । हरेक मानिस के चाहन्छ भने म कम पैसामा राम्रो चिज या बस्तु प्राप्त गरुँ तर त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसैले विरामीले प्रयोग गरेको वस्तु या चिज अनुसार फिस लिँदा सरकारी हस्पीटलमा लिइने अलिबढी रकम लिइने हुँदा विरामीले फरक अनुभव गर्छ । वास्तवमा त्यसो होइन । जस्तो सामानको प्रयोग भएको छ त्यहि अनुसार फिस वा शुल्क लिइएको हुन्छ । हरेक सामान जो हामी बजारमा किन्न जाँदा पनि यस किसिमको फरक हामी पाउँछौ । यो क्षेत्रमा पनि त्यही हो । मात्र बुझाई फरक हो ।
कहिले काहीँ केही पाउनका लागि ओभर एक्टिङ गर्नु भएको छ कि छैन ?
गरेको छु र गर्छु पनि । त्यो पनि म घरभित्रै यस्तो एक्टिङ गर्छु र रोएरै जित्न खोज्छु । जहाँ मलाई भेदभाव भएको जस्तो लाग्छ त्यतिबेला म अत्यन्त भावुक भएर म त्यसो गर्छु ।